Kitra sy olana anatin'ny FMF - Tandindomin-doza ny Barean’ i Madagasikara • AoRaha
Kitra sy olana anatin’ny FMF – Tandindomin-doza ny Barean’ i Madagasikara
Herinandro vitsy mialoha ny hirosoana amin’ ny fifanintsanan’ny fiadiana ny amboara eran-tany. Manomboka miseho lany ny olana izay manaratsy endrika indray an’i Madagasikara sy mikasa hampilentika ny Barea. Mandindona ny ekipam-pirenena malagasy indray ny loza, ankehitriny, vokatry ny olana anatin’ny federasiona (FMF) sy ny tsy maha eto an-toerana ny filoha mpitarika izany.
Mitarika fizarazarana eo amin’ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny FMF, izay samy miady ny ho lohany, izany tranga izany. Manasarotra ny fandraisana fanapahankevitra momba ny Barea ny tahaka izao, izay efa niseho foana hatramin’izay niatrehantsika fifaninanana iraisam-pirenena tato ho ato izay. Samy manana ny firehany rahateo ireo mandrafitra ny komity mpanatanteraka ka mizarazara ho ekipan-dranona sy ekipan-dranona. Ohatra akaiky ny filazan’ny ekipan-dRandriamanampisoa Alfred, filoha lefitra faharoan’ ny FMF, fa “hotazonina ny mpanazatra nasionaly” na dia tsy nisy aza ny fandraisana fanapahankevitra milaza fa haato izy. Fanambaràna navoakan’ny FMF, omaly, taorian’io fanambaràna teny amin’ny kianjan’ny Elgeco Plus Stadium By Pass no miampanga azy ireo ho “mpisandoka andraikitra”.
Ahiana, noho izany, ny mety hanasazian’ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa) an’i Madagasikara sy ny ekipam-pirenena amin’ izany savorovoro tsy misy fiafarany izany. “Rehefa tsy voafehy io korontana io dia mety hiafara amin’ny fanilihana ny ekipam-pirenena malagasy, tahaka ny nahazo an’ i Tchad, ny raharaha”, araka ny nambaran’ny manampahaizana mombany baolina kitra iray.
Etsy an-kilany, hatahorana ny tsy hampitombin-tsaina an’ireo mpilalao hiatrika ny fifaninanana vokatr’izao savorovoro izao indray. Ny tsy fisian’ny fanapahankevitra momba izay ho mpanazatra nasionaly, na hotazonina na hoesorina, no mety hiteraka izany tsy fitonian-tsaina izany. Efa nandentika an’i Nicolas Dupuis ny tatitra nataon’ny fiadidiana teknika nasionalin’ ny FMF. Manampy trotraka ihany koa ny fiditridirany amin’ny sehatra tsy tokony hidirany, ankoatra ny tsy fahombiazan’ny Barea tamin’ ny fifanintsanana nataony farany. Tsy dia fahita amin’ ny firenen-dehibe amin’ny taranja baolina kitra ny toy izao.
Toa manao valy bontana ka miteraka tsy fankatoavana ny ekipan’ny filohan’ny FMF am-perinasa ny mpanazatra nasionaly, ankehitriny. “Tsy mbola nisy tatitra nataony tamin’ireo lalao rehetra natrehiny hatramin’izao na dia voafaritra ao anatin’ny fifanarahana izany”, araka ny loharanom-baovao avy ao amin’ny FMF. Isan’ireo tsy levon’ny vavonin’ity teknisiana ity rahateo ny valim-panontaniana nataondRabekoto Raoul, fony izy vao lany, hoe “iza moa izany olona izany” rehefa nanontaniana momba an’ i Nicolas Dupuis izy.
Miandry ny fitoviampijerin’ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraky ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra izany ny hoavin’ny Barean’i Madagasikara amin’ireo ady hatrehany amin’ny fifanintsanan’ ny “Mondial 2022” sy CAN 2023.
Kitra – Olana anatin’ny FMF :: Mananontanona ny fahatapahan’ ny famatsiam-bolan’ny Fifa